Cheap iPhone Review: How much suitable to Buy? - TechPana Tech News Nepal
२०७८, ९ माघ आइतबार |
मंगलबारदेखि त्रिवि अन्तर्गतका कलेजमा अनलाइन कक्षा, परीक्षा पनि अनलाइनबाटै लिने तयारी
जब प्रयोगकर्ता बेहोस हुँदा एप्पल वाचले एम्बुलेन्स बोलायो
हाम्रो घरघरमा कसरी आइपुग्छ इन्टरनेट ?
शेयर मूल्य घट्दा प्रविधिका हस्तीले गुमाए अर्बौ डलर, कसलाई कति घाटा ?
ओपेराले ल्यायो नयाँ क्रिप्टो ब्राउजर, क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गर्न सजिलो हुने
सस्ताे आईफोनको रिभ्यूः खरीद गर्न कति उपयुक्त ?
सोमबार, बैशाख १५, २०७७
काठमाडौं । एप्पलले भर्खरै मात्र नयाँ आईफोन एसई सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीकाे सबैभन्दा सस्तो फोनको रुपमा बजारमा आएको उक्त फोनमा केही फिचर भने फ्ल्यागशिप फोनकै जस्ता छन् । जसले याे फोनमा पैसा खर्च गर्न प्रयोगकर्तालाई लालायीत बनाउनेछ ।
याे फोनको सबैभन्दा मूख्य आकर्षक पक्ष भनेकै यसको मूल्य हो । ६९९ अमेरिकी डलर (८५ हजार रुपैयाँ माथि) मूल्यको आईफोन इलाभेनको तुलनामा आईफोन एसई करीब आधा सस्तो अर्थात ३९९ (करीब ४९ हजार) डलर मात्र छ । मूल्य सस्तो भएता पनि फोनमा प्रयाेग गरिएकाे क्यामेरा फिचर भने आईफोन इलाभेनको जस्तै छ ।
यो फोन २०१६ मा आएको ओरिजिनल एसईको २०२० सिक्वेल हो । ४.७ इञ्चको डिस्प्ले भएको फोन सानो र आकर्षण डिजाइनमा उपलब्ध छ । आईफोन एसईलाई आइफोन एटको मेमोरी र आईफोन इलाभेनको शक्ति भएको फोनकाे रुपमा हेरिएको छ ।
आईफोन एसईको डिजाइन क्लासिक छ । यसको बडी र क्यामेरा लेन्सहरु २०१७ को आईफोन एट जस्तै छन् । एप्पल कम्पनीले आईफोन एसईमा तीन वर्ष पुरानो प्रोसेसरको साटो आईफोन इलाभेन, इलाभेन प्रो र इलाभेन प्रो म्याक्समा प्रयोग भएको ए १३ बायोनिक प्रोसेसर नै प्रयाेग गरेको छ ।
यो नयाँ प्रोसेसर फास्ट रन हुनुका साथै यो फोनमा आगामी दिनमा पनि आईओएस अपडेट गरिने कम्पनीले सुनिश्चित गरेको छ । तर ३९९ डलरकाे यो फोनमा केही सुरक्षा कमजोरी भने रहेका छन् ।
यो फोनमा सिंगल रियर क्यामेरा रहेको छ । यसमा फेस आईडी लककाे सुविधा छैन । साथै यसमा नाइट मोड, स्लोफिस र डिप फ्युजन प्रोसेसिङ जस्ता क्यामेरा फिचर पनि उपलब्ध छैनन् । यो फोनको सेल्फी सन्तोषजनक छ । तर आईफोन इलाभेन सिरिजको जस्तो आकर्षक भने छैन । फोनमा उपलब्ध फिचरहरुले यसको मूल्यलाई न्याय गरेको छ ।
सस्तो मूल्य, आकर्षक ब्याट्री क्षमता, उत्कृष्ट रियर क्यामेरा, ए १३ प्रोसेसर, वाटर रेसिस्टेन्स र वायरलेस चार्जिङ लगायतका फिचर रहेको एसईले ११ सिरिजले जस्तै पर्फमेन्स दिनेछ ।
आउँदो महिना सार्वजनिक हुँदै सामसङ ग्यालेक्सी एस२२, कस्ता होलान् फिचर ?
काठमाडौं । सामसङले आउँदो फेब्रुअरीमा आफ्नो बहुप्रतिक्षित फ्ल्यागशिप सिरिज सामसङ ग्यालेक्सी एस२२ सार्वजनिक गर्ने भएको
आईफोन १५ मा कस्तो आउला क्यामेरा ?
काठमाडौं । सन् २०२२ मा एप्पलले आईफोन १४ ल्याउँदैछ । बजारमा आईफोन १४ को विषयमा
काठमाडौं । साओमीको पछिल्लो फ्ल्गाशिप मोडल साओमी १२ विश्वबजारमा कहिले उपलब्ध होला भनेर धेरैले पर्खिरहेका
विश्व बजारमा आउँदो साता सार्वजनिक हुँदै रेड्मी नोट ११ सिरिज, नेपालमा कहिले आउला ?
काठमाडौं । साओमीले आउँदो २६ जनवरी (माघ १२ ) मा रेड्मी नोट ११ सिरिजको ग्लोबल
ह्वावे प्रविधिका कारण चीनमा बढ्यो फाइभजी स्पिड र कभरेज